UMBONO: Ukuba yinkokeli kushishino lweefotonic zehlabathi.
Sigxile kwishishini le-optoelectronic;xabisa intembeko kunye nokuphathiswa kwabathengi, ukusungula izinto ezintsha, kwaye uqhubele phambili ukuze ube ngowona mbutho uphambili unempembelelo enkulu kunye nodumo oluphezulu kwihlabathi.
UMNQOPHISO: Yandisa ubude bamaza.
Siqesha iitalente ngengqondo ephangaleleyo, ukuze isakhono sethu sethekhinoloji siqhubeke siphuculwa kwaye ishishini lethu liquka uluhlu olubanzi lwemimandla.
IMITHETHO ENGUNDOQO: uMthengi, uMgangatho, uTshintsho, ukusebenza ngokufanelekileyo
UmThengi:Njengomyili kunye nomdluliseli wexabiso, besihlala sizibophelele ekudaleni ixabiso lentengiso kunye nokunceda abathengi bethu baphumelele.Kuphela kukuqatshelwa kwemarike kunye nokwaneliseka kwabathengi kukuqinisekisa kokugqibela kwexabiso lethu.Ke ngoko, ukuxatyiswa kwabathengi kunye nokusukela ngokungenasiphelo ukwaneliseka kwabathengi kuphezu kwenkqubo yethu yexabiso.
Umgangatho:Umthwali wexabiso lethu ngamava apheleleyo omthengi kubandakanya iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezicingelwayo.Iimfuno zobuqu zeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo zivela kwingqiqo yoxanduva oluphathiswe abathengi kunye namandla okuqhuba ukufezekisa ukuzixabisa.
Ukusungula:Ngelixa unceda abathengi baphumelele, sazi kakuhle ukuba imfezeko yayizolo ayithethi ukubalasela kwanamhlanje.Kuphela ngokwenza izinto ezintsha eziqhubekayo sinokulandela isantya sophuhliso lwabathengi kunye notshintsho lwemarike.Ukwenziwa kwezinto ezintsha kunye notshintsho yinxalenye ebalulekileyo yemfuza yenkampani yethu.
Ukusebenza kakuhle:Ukufezekiswa kombono wenkampani kunye nokuzaliseka kwezibophelelo zabathengi kuxhomekeke ekuqhutyweni okusebenzayo okuqhutywa ngaphakathi.Ukusebenza kakuhle kukwasisiqinisekiso sethu sokubonelela abathengi ngezisombululo ezikwixabiso eliphantsi kunye nokhuphiswano lwentengiso kunye nokubuyisela inzuzo kubaninizabelo bethu.